ကီမိုနိုနှင့်အ Yukata | Experience Japan
› ဘလော့ Myanmar › ကီမိုနိုနှင့်အ Yukata
အဆိုပါကီမိုနိုနှင့်အ Yukata ကီမိုနိုရိုးရာဂျပန်အဝတ်အစားဖြစ်ပါတယ်။ Yukata ကီမိုနိုအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကီမိုနိုအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌ဝတ်ဆင်ထားသည်။ Yukata နွေရာသီအတွက်ဝတ်ဆင်ထားသည်။
အဆိုပါကီမိုနိုနှင့်အ yukata အကြားခြားနားချက်တွေဟာက) ရာသီ (ကီမိုနို: ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ, yukata: နွေရာသီ), ခ) အင်္ကျီလက် (ကီမိုနို = ရှည်လျားသောအင်္ကျီလက်, yukata: အထည်၏တိုတောင်းသောအင်္ကျီလက်), ဂ) အထူ (ကီမိုနို: ထူထည်, Yukata: ပါးလွှာ ထည်) ။ ကီမိုနိုနှင့်အ yukata အကြားများစွာသောအခြားကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်။ ဂရုတစိုက်အောက်ပါဇယားကိုဖတ်ပါ။
ကီမိုနိုနှင့်အ yukata အကြားကွာခြားချက်များ ကီမိုနို Yukata
ဘယ်လိုထည်လဲ? ထူသော ပါးသော
ဘယ်အချိန်မှာလူများကဝတ်ဆင်သလဲ? ကျဆုံးခြင်း & ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ
အရာအခါသမယအတွက်? မင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနား, လက်ဖက်ရည်အခမ်းအနား, လာမယ့်-of အသက်အရွယ်အခမ်းအနား
ဘယ်လို motif ပါသလဲ အဆိုပါခါးပန်းအထက်တွင်ရိုးရှင်းတဲ့ဒီဇိုင်း, pastel အရောင်များကိုအနည်းငယ်သာဒီဇိုင်း
ဘယ်လောက်ကြာအဲဒါကိုဝတ်ဆင်ရန်ယူပါသလဲ? မိနစ် 20 အထိ 2-3 မိနစ်
ထိုသို့လုပ်ကဘာလဲ? ပိုး ဝါ
ဒါဟာဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ, $ 500 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို $ 50 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို
အဆိုပါလက်ရဲ့အရှည်ကဘာလဲ? ရှည်လျားသော တိုတောင်းသော
မတူညီသောအမျိုးအစားများဘာတွေလဲ? Uchikake, furisode, hakama, homongi, tomesode, hiromuku –
လူတိုင်းကဝတ်ဆင်နိုင်ပါသလား? သာတစ်ခုတည်းသောအမြိုးသမီးမြား furisode ဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ် –
အတွင်းစိတ်အလွှာရှိပါသလား ဟုတ်ကဲ့ (nagajuban) အဘယ်သူမျှမ
ဘယ်လိုဖိနပ်များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများရှိပါသလဲ (zori) ကြော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး (geta)
ကီမိုနိုနှင့်အ yukata အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ Maikoya မှာအတှေ့အကွုံ ကီမိုနို၏အဓိပ္ပာယ်:
ကီမိုနိုအဝတ်အစားအဘို့အတစ်ချိန်ကဂျပန်စကားလုံးခဲ့ပေမယ့်ဒီနေ့ခေတ်ရှေးဂျပန်ကနေရိုးရာအဝတ်အစားကိုရည်ညွှန်းသည်။ မင်းသမီးဝတ်ဆင်သောရှည်လျားသောသင်္ကန်းအရှိဆုံးဂျပန်အဝတ်အစားများ၏အသိအမှတ်ပြုနေကြတယ်, ဒါပေမယ့်စကားလုံးကီမိုနိုလည်းအဖြစ်ကောင်းစွာလူပင်ပန်းသည့်စတိုင်သင်္ကန်းနှင့်ဘောင်းဘီရှည်ကိုရည်ညွှန်းရန်အသုံးပြုသည်။
Koshi himo Cottonအရပ်၌ရှိ
1. juban လို့ခေါ်တဲ့စလစ်ပေါ်မှာထားပါ။ ဒါဟာရေသုတ်ကုတ်အင်္ကျီနဲ့တူကိုက်ညီနှင့်ခြမ်းမှာ snugly ချည်ထားရပါမည်။
2. ပိုးပြင်ကီမိုနိုအင်္ကျီအားဖြင့်သင်တို့၏လက်နက်ထားပါ။ ဝတ်လုံ၏နောက်ကျော panel ကိုဗဟိုပြုနေသည်သေချာအောင်လုပ်ပါ။
3. ဘယ်ဘက်ကိုပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ဝှမ်းဝတ်လုံ၏ညာဘက်အခြမ်းထုပ်။ ပိုလျှံပစ္စည်းလည်းမရှိဆိုပါကဝတ်လုံသင့်ကျောဖို့ဝန်းကျင်သို့ရောက်ရှိကြောင်းအဆင်ပြေသည်။ အဲဒါကိုထပ်နေပါသည်ထို့ကြောင့်ဘယ်ဖက်ခြမ်းခြုံ။ ဖေါ်ပြခြင်းလျှင် juban စလစ် Adjust ။
7. နှစ်ခု Obi hanhaba အတူတူကုန်ဆုံးတုပ်နှောင်ခြင်းနှင့်ခါးပန်းတင်းကျပ်။ ဒါဟာလာမယ့်ခြေလှမ်းအဘို့အတော်လေးတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်လိမ့်မယ်။ အဆိုပါ Obi ကြီးစွန်းတိုင်အောင်ယခု Obi သို့မဟုတ် datejime သို့တွေထဲမှာအောင်းနေနိုင်ပါတယ်ရပါမည်။ အဆိုပါ Obi အလုံအလောက်တင်းကျပ်စွာဖြစ်ပါတယ်လျှင်, ခါးပန်းထွက်ကျကြလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ လူအပေါင်းတို့သည်ပြားအဆင့်ဖြစ်ကြပြီးဗဟိုပြုဒါကီမိုနိုအင်္ကျီကိုမှနောက်ဆုံးချိန်ညှိထားပါ။
8. ယခု accessorise ဖို့အချိန်ပါ! တစ်ဦးကကီမိုနိုဖြစ်စေသည့် geta သို့မဟုတ် zori စတိုင်, ခြေနင်းတရံနှင့်အတူဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်။ အတော်များများကဂျပန်အမျိုးသမီးများကိုပန်းပွင့်ဆံပင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအတူ Bun အတွက်သူတို့ရဲ့ဆံပင်ဝတ်ဆင်။ သင်သည်လည်းသင်၏အပိုးကီမိုနိုကိုက်ညီသောအဆင်းလှသောပန်ကာသို့မဟုတ်အိတ်ကိုဝယ်နိုင်သတိရပါ!
အကီမိုနိုများ, အ yukata ဂျပန်အဝတ်အစား၏တစ်ဦးထက်ပိုအလွတ်သဘောစတိုင်ဖြစ်ပြီးများသောအားဖြင့်ဝါဂွမ်းမှထွက်ကိုဖန်ဆင်းသည်။ ဒါဟာလူမှုရေး bathhouse သွားရောက်လည်ပတ်၏ကျော်ကြားမှုနှင့်အတူအစပြု။ အဖြူနှင့်အမဲနယ် yukatas အဖြူရောင်ဝါဂွမ်းအဖြစ်ဘုံဖြစ်လာခဲ့သည်သည့်မဲနယ်ထည်ထဲမှာဆိုးဆေးတစ်ဦးအင်းဆက်ပိုးမွှားတွန်းလှန်အဖွစျဆောငျရှကျခဲ့စဉ်ကလူနွေရာသီအတွက်အအေးထားရှိမည်။ ဂျပန်ကလူတွေများသောအားဖြင့်မီးရှူးမီးပန်းများပွဲတော်များနှင့်အခြားပြင်ပဖြစ်ရပ်များမှာနွေရာသီကာလအတွင်းတစ်ဦး yukata ဝတ်ဆင်။ သူတို့ဝတ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသောကြောင့်သူတို့ကအမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးများနှင့်အတူအလွန်ရေပန်းစားဖြစ်ကြသည်။
တစ်ဦး Yukata အပေါ်ခြင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်:
1. yukata အင်္ကျီအားဖြင့်သင်တို့၏လက်နက်ထားပါ။ ဝတ်လုံ၏နောက်ကျော panel ကိုဗဟိုပြုနေသည်သေချာအောင်လုပ်ပါ။
2. ဘယ်ဘက်ကိုပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ဝှမ်းဝတ်လုံ၏ညာဘက်အခြမ်းထုပ်။ ပိုလျှံပစ္စည်းလည်းမရှိဆိုပါကဝတ်လုံသင့်ကျောဖို့ဝန်းကျင်သို့ရောက်ရှိကြောင်းအဆင်ပြေသည်။ အဲဒါကိုထပ်နေပါသည်ထို့ကြောင့်ဘယ်ဖက်ခြမ်းခြုံ။
အရပ်ဌာန၌ yukata စောင့်ရှောက်ရန် 3. တစ် koshi himo ခါးပတ်ချည်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ပထမဦးဆုံးအသငျသညျနောက်ကွယ်ကခါးပတ် Hold နှင့်သင့်ရှေ့ကိုဖြတ်ပြီးကကြိုးနဲ့တုတ်။ အဆိုပါ koshi himo ခါးပတ်အရှေ့ဘက်မှာရှိတဲ့ပိုလျှံပစ္စည်းအောက်မှာဝှက်ထားလျက်ရှိ၏သို့မှသာအဆိုပါကီမိုနိုအင်္ကျီကိုယခုချိန်ညှိရပါမည်။
ရိုးရာဂျပန်အဝတ်အစားနှင့် ပတ်သက်. ပျော်စရာအချက်အလက်:
ကြောင့်ဂျပန် woodblock ထုတ်မှ 1. သည်ကီမိုနိုဟာ geisha ၏ဂုဏ်အသရေနှင့်ဘုန်းနှင့်အတူဆက်နွယ်နေဖြစ်လာသည်။ အမျိုးသမီးအများစုနေ့စဉ်အသက်တာ၌ကီမိုနိုကိုဝတ်ဆင်ကြဘူးအဖြစ်ခေတ်သစ် geishas နှင့်၎င်းတို့၏သင်တန်းသားသူတို့၏တစ်ဦးချင်းစီအခွက်မြှင့်တင်ရန်နိုင်ရန်အတွက်ပိုမိုမကြာခဏရိုးရာအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်။ နွေဦးကာလအတှငျး, သင် geishas သို့မဟုတ်သင်တန်းသားသူတို့၏လှပသောအဝတ်အတွက်ကျိုတိုနဲ့တူခရီးသွားနေရာများတဝိုက်လမ်းလျှောက်မြင်ရလိမ့်မည်။
2. တစ်ဦးကဂျပန်ယောက်ျားမိန်းမကအရမ်းအထူးအခါသမယများအတွက်တစ်ကီမိုနိုကိုဝတ်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့သာသူတို့ဘဝအတွက်တကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်ကီမိုနိုကိုဝတ်ဆင်စေခြင်းငှါအဖြစ်န်ဆောင်မှုများငှားရမ်းကီမိုနိုရှိပါတယ်။ တိကျတဲ့အခါသမယများအတွက်အထူးသင်္ကန်းတစ်ခုမှာတစ်ဦးမင်္ဂလာဆောင်မယ့်မင်္ဂလာဆောင်ကီမိုနိုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအမျိုးသမီးရဲ့အပြင်ဘက်ပိုးအင်္ကျီကိုအစဉ်အလာ, အဖြူအနက်ရောင်သို့မဟုတ်အနီရောင်ဖြစ်စေသည်နှင့်အနုစိတ်ဒီဇိုင်းရှိပါတယ်။ သတို့သမီးကိုလည်းတူညီသည့်ပါးပျဉ်းဝတ်ဆင်စေခြင်းငှါ, တစ်ဦးသတို့သမီးကုလားကာဂျပန်ဗားရှင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသော wataboshi ခေါ်။ သတို့သားရဲ့ပိုးအင်္ကျီအဖြူရောင်ခါးပန်းနှင့်အတူအနက်ရောင်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ထပ်အခမ်းအနားလူတို့သညျနှငျ့အမြိုးသမီးအနက်ရောင်ဆက်ဆံမှုနှင့်အတူအနက်ရောင်ကီမိုနိုသင်္ကန်းဝတ်ဆင်ခဲ့ကြသည်အသုဘဖြစ်ပါတယ်။ နယူးနှစ်များသူတို့တဦးတည်းရှိသည်ဖို့လုံလောကျကံကောင်းလျှင်လူတွေနှစ်စဉ်သင်္ကန်းဝတ်ဆင်ရန်အဘို့အလူကြိုက်များအားလပ်ရက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဇန်နဝါရီလ3နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသူတို့အသက်နှစ်ဆယ်ရောက်ရှိကြတခါ, အရွယ်ရောက်အသက်သူတို့ရဲ့ကြွလာဆင်နွှဲ။ အများစုကအမျိုးသမီးတွေမကြာခဏသားမွေးဘိုအာနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အကောင်းဆုံးကီမိုနိုကိုဝတ်ဆင်။ အဆိုပါလူကြီးများတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကအရွယ်ရောက်ပြီးသူအဖြစ်သူတို့ကိုကြေညာမယ်လို့သူတို့ရဲ့ဇာတိမြို့အတွက်အခမ်းအနားတက်ရောက်ရန်။ ယင်းနောက်လူတိုင်း၎င်းတို့၏မိသားစုများနှင့်အတူအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့အဖြစ်မူလတန်းကျောင်းကနေအဟောင်းမိတ်ဆွေများက။
ငါး – – သုံးအထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပသားသမီးတို့အဘို့ကီမိုနိုကိုဝတ်ဆင်ကြောင်း 4. တစ်ခုမှာအရေးကြီးသောအဖြစ်အပျက်ကိုလည်းခုနစ်အဖြစ်လူသိများသည့် Shichi-Go အဘိဓါန် San အထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများနိုဝင်ဘာလ 15 ၏ပွဲတော်နေ့၌ခုနစ်ခု, ငါးသို့မဟုတ်သုံးနှစ်အသက်ဖြစ်ခြင်းကျင်းပတဲ့အခါဒီဖြစ်ပါသည်။ ကသားသမီးများ၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကိုသူတို့ရဲ့တိုးတက်မှုနှင့်သုခချမ်းသာဝေမျှဖို့ခွင့်ပြုအဖြစ်ဤသည်နေ့ရက်သည်အထူးဖြစ်ပါတယ်။
5. ရိုးရာဂျပန်အင်္ကျီ၏အခြားအမျိုးအစားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကား Happy အင်္ကျီကိုခေါ်တိုတောင်းသောသင်္ကန်းဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကအများအားဖြင့်တစ်မိသားစုမောက်သို့မဟုတ်အားလပ်ရက်သင်္ကေတကိုပြ။ ရှေးခေတ်ဂျပန်မှာတော့သူတို့ပွဲတော်များမှာဝတ်ဆင်ခဲ့ကြသည်ပေမယ့်မကြာသေးမီကဂျပန်စားသောက်ဆိုင်နောက်ကျောအပေါ်ပြသစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုဂိုနှင့်အတူန်ထမ်းယူနီဖောင်းအဖြစ်သူတို့ကိုရှိသည်။
6. အခမ်းအနားကီမိုနိုဒါသည်အထူးသည်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်ပစ္စည်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤအကီမိုနိုအလွှာထဲကအတော်များများအရည်အသွေးမြင့်ပိုးထဲကလုပ်ကြသည် – နီးပါးသန်းယန်းသို့မဟုတ်နီးကပ်မှ $ 9000 အမေရိကန်ဒေါ်လာကုန်ကျရသော။ ဒါဟာအမျိုးသမီးတစ်ဦးမိမိကိုယ်ကိုအားဖြင့်တစ်ဦးစျေးကြီးကီမိုနိုအင်္ကျီကိုအပေါ်ထားရန်ရုန်းကန်မယ်လို့အဖြစ်ပေါ်တွင်တင်ဖို့လည်းအလွန်ခက်ခဲသည်။ ဒါကအများကြီးအလွှာအောက်မှာအဖြစ်လှည် Obi လည်စည်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးများပုံမှန်အားဖြင့်ကူညီပေးဖို့ဟာသူတို့ရဲ့မိခင်ကိုမေးအဖြစ်တစ်ကီမိုနိုကျောင်းတွင်သင်တန်းယူရှိသည်။
7. ကီမိုနိုများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏အကြီးဆုံးစုဆောင်းခြင်း Fukiko Higuchi အားဖြင့်ကောက်ယူခဲ့သည်။ သူမသည်စုဆောင်းဖို့တဆယ်နှစ်ကျော်ယူ 3,040 ကျော်အပိုင်းပိုင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမသည်ထည်, ပန်းနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပျက်စီးလိမ့်မည်မဟုတ်သေချာစေရန်အထူးကိုင်ဆောင်သောနှင့်ထိန်သိမ်း၌သူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့ရတယ်။ Fukiko 67 လှည့်ပြီးနောက်သူမဂျပန်န်းကျင်နေရာများ၏အကွာအဝေးမှာပြသခံရဖို့သူမ၏ကီမိုနိုအဘို့အခွင့်ပြုချက်ကိုပေး၏။
8. အကြီးဆုံးကီမိုနို 18 ကျော်မီတာကျယ် (60.24 ပေ) နှင့် (53.64 ပေ) က 16 ကျော်မီတာမြင့်သော။ ဤသည်မတ်မတ် “Gundam” ဟုခေါ်နေတဲ့စက်ရုပ်များအတွက် Eiko Kobayashi ကဒီဇိုင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါကီမိုနိုကရိန်းလေထဲသို့ကြီးပြင်းခဲ့ကြတခါကတိုင်းတာဖို့လေဆာလိုအပ်နိုင်အောင်ကြီးမားခဲ့သည်။ ဒါဟာမတ်မတ်ပြီးဆုံးရန်တစ်နှစ် 15 လုပ်သားများကိုယူ။
ဟဲအိအန်ကာလ (794- 1192 အေဒီ) တွင် 9, ကတစုံတယောက်သောသူသည်တစ်ကြိမ်မှာကီမိုနို၏ 20 မှ 25 အလွှာဝတ်ဆင်ဖို့ဂျပန်ဧကရာဇ်တရားရုံးတွင်မြင့်မြတ်သောမိန်းမတို့အဘို့ပုံမှန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤသည်ဤမျှလောက်လမ်းလျှောက်နီးပါးမဖြစ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း, သူတို့လှုပ်ရှားမှုကန့်သတ်။
10. ဂျပန်အစိုးရကီမိုနိုအနုပညာရှင်များလက်တဆုပ်စာအမျိုးသားရေးဘဏ္ဍာကိုဖြစ်စဉ်းစား။ ဤရွေ့ကားအနုပညာရှင်တွေကီမိုနိုအောင်နှင့် decorating များအတွက်ရိုးရာနည်းစနစ်ကိုထိန်းသိမ်း။ သူတို့ရဲ့သင်္ကန်းတဦးတည်း-of-a-မျိုးဖြစ်စေခြင်းနှင့်အရှိဆုံးပန်းချီကားထက်ပိုပြီးစျေးကြီးဖြစ်ကြ၏။ တချို့က 100,000 $ ကျော်အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြင့်ရောင်းချခဲ့ကြသည်။
MaikoyaYukataဂျပန်ကီမိုနိုmaikoya အိုဆာကာMaiko ကဖေးMaiko မီးဖိုချောင်ဂျပန်အဝတ်အစားဂျပန်နွေရာသီဂျပန်ရိုးရာအဝတ်အထည်yukata နှင့်ကီမိုနိုအကြားခြားနားချက်